Mamaky bantsilana ny Amnesty International: feno hipoka, tsy mifanaraka amin’ny maha olona ny fonja | NewsMada
Mamaky bantsilana ny Amnesty International: feno hipoka, tsy mifanaraka amin’ny maha olona ny fonja
Par Taratra sur 24/10/2018
Tao anatin’ny 10 taona, niakatra be ny isan’ny vehivavy sy ny ankizy naiditra am-ponja eto amintsika. Tsy voahaja ny zon’olombelona. Maro ny maty tany am-ponja kanefa tsy nandalo fitsarana akory…
Mahatratra 11 000 ny isan’ny olona tazonina vonjimaika am-ponja ka lehilahy avokoa ny 89%-n’ireo, mbola tsy voatsara, miaina anaty toerana tsizarizary sy tsy azo iainana akory. 6% ny vehivavy ary 5% ny ankizy, tazonina vonjimaika miandry ny fitsarana azy. Omaly ny nanehoan’ny Amnesty International ireo, teny amin’ny hotel Carlton, vokatry ny fanadihadiana nataon’izy ireo momba ny fanajana ny zon’ny voafonja tazonina vonjimaika. Nisy ny fanadihadiana sy ny boky mifanaraka amin’izany nampitondraina ny lohateny “gadraina izahay satria mahantra”.
Namaky bantsilana ny faharatsian’ny fonja eto amintsika, ny tsy fanajana ny zon’olombelona, indrindra ho an’ireo olona tsy mbola voatsara, ny Amnesty International. “Mihoatra amin’ny tokony ho isan’ny ao am-ponja ny isan’ny voafonja. Ny tsy voatsara indray no maro miohatra ny efa voatsara”, hoy ny fanazavan-dramatoa Tamara Leger, avy amin’ny AI nanatontosa ny fanadihadiana. Raha ny any amin’ny fonjan’i Manakara fotsiny, 150 ny zakan’ny fonja, kanefa mahatratra 700 ireo tanana ao. “Maro ny olona tazonina am-ponja noho ny halatra akoho, finday, nefa tanana am-ponja maharitra tsy tsaraina akory. Lava no ho ny sazy azon’ny voafonja ny fitanana vonjimaika. Ela loatra ny fanapahan-kevitry ny fitsarana”, hoy ny AI.
Ankoatra ny sakafo tsizarizary, ny zaza miaraka amin’ny reniny voafonja, tsy mahalala ny zony ary tsy mbola nisy nahita izany mpisolovava izany ireo voafonja. Eo koa ny tsy fisian’ny fitsaboana ara-dalàna. Nisy, ohatra, ny olona lanin’ny voalavo, tsy voatsabo ka mitarika any amin’ny tsy fahasalamana, sns. Ny taona 2017, 129 ny isan’ny voafonja maty, ary 52 amin’ireo ny voafonja tazonina vonjimaika. Nambaran’ny Amnesty International fa haneho ireo ho an’ny fitondram-panjakana izy ireo, handraisan’ny minisitera andraikitra. Nisy ny fihaonana tamin’ny minisitra, ny praiminisitra, sns. Kely ny tetibola kanefa efa tranga nisy eto amintsika hatramin’izay izao. Mbola ezaka ho an’ny fanjakana izany ny resaka zon’olombelona sy ny fonja.